အပြို စဈစဈ မြားသာ ဖတျရနျ....အအိုတှဖေတျမိရငျ စိတျဓါတျကမြှာစိုးလို့ပါ - MM Live News
အပြို စဈစဈ မြားသာ ဖတျရနျ….အအိုတှဖေတျမိရငျ စိတျဓါတျကမြှာစိုးလို့ပါ
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး တမျိုး မထင်ပါနဲ့နော်အအိုတွေဖတ်မိရင် စိတ်ဓါတ်ကျမှာစိုးလို့ပါ
အပျိုစစ်စစ်ဆိုတာက ခုခေတ်က ၁၆ နှစ်၁၇နှစ်ဆိုရင်ကို ရည်းစားက ရှိနေကြတာ ။ ရည်းစားဖြစ်တာ ၁ ရက်မကြားဘူး living together က နေနေကြပြီလေ…..တကယ်တော့ လက်မထပ်ရသေးပဲနဲ့အတူတူနေကြတာ မိန်းခလေးတစ်ယောက်အတွက် လုံးဝတန်ဖိုးကျသွားပါပြီ….
အပျိုစင် ဘဝဆိုတာ ယောင်္ကျားတိုင်းရဲ့ တန်ဖိုးထားခြင်းကို ခံထားရသူလို့တောင် တင်စားထားကြပါတယ်အပျိုစင်ကနေ အအို ဖြစ်ဖို့က ၅မိနစ်မကြာပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် အအိုကနေ အပျို ပြန်ဖြစ်ဖို့က ရှိသမျှ စည်းစိမ်း ပုံပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ ဘဝအတွက်ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး…..
ချစ်သူရှိခဲ့ရင်လည်း ဒီအပျိုစင်ဘဝကို ထိန်းသိမ်းပါ။ ချစ်သူကို နားလည်အောင် သူသဘောပေါက်အောင် ပြောပြထားပါ။ ဒါမှ သူဘက်က လက်မခံဘူး ။စိတ်ခုသွားတယ်ဆိုရင်တော့ ရဲရဲကြီးသာ လမ်းခွဲလိုက်ပါ။ သူ တကယ်ချစ်တာမဟုတ်တာသေချာနေပါပြီ။
သေလောက်အောင်ချစ်နေပါစေ အပျိုစင် ဘဝကိုထိန်းသိမ်းထားပါ။ဘဝမှာ ရည်းစားဦးနဲ့လွဲကျတာ ၁၀၀မှာ ၉၀ အထိ ရှိထားတာပါ။ ရည်းစားဦးကတည်းက အပျိုစင်ဘဝကို ပေးထားခဲ့လို့။
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် သူနဲ့များ လွဲသွားခဲ့ရင် နောင်တွင် ကိုယ်နဲ့တကယ်လက်တွဲရမယ့် ယောင်္ကျားနဲ့တွေ့မှာ အကြီးကြီးနောင်တရပါလိမ့်မယ် ။အဲကျမှတော့ နောင်တရပါတယ်လို့သိသွားလည်းနောက်ကျသွားပါပြီ။အခန့်မသင့်ရင် အိမ်ထောင်ရေပြသာနာတွေတောသ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်မှာ အိမ်ထာင်ကျပြီးလို့ကလေးတောင် ၃ယောက် ရပြီးမှ အပျိုဘဝတုန်းက ရည်းစားဟောင်းနဲ့အတူတူနေခဲ့တဲ့ video ဖိုင်တွေ laptopကနေတဆင့်ပြန့်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးကွဲသွားခဲ့တာ တကယ်လက်တွေ့ပါ။
အတုမယူသင့်တာတော့ အတုမယူပါနဲ့ညီမတို့။ (နောက်တစ်တစ်ခု အွန်လိုင်းမှာ statusတင်ရင်လည်း စောက်ဘာဖြစ် စောက်ညာဖြစ်တယ် ။အဲလို စောက်တွေထည့်ထည့်ပြီး ရိုင်းတာတွေ မတင်ကျဖို့လည်း တောင်းဆိုပါတယ်။
ကိုယ်ဟာကိုယ် ဘာထင်နေလဲတော့မသိပါ။ အများအမြင်မှာ အရမ်းရိုင်းတဲ့မိန်းမဆိုတာတော့ လူတိုင်းအထင်သေးသွားတတ်ကြပါတယ်။ )မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာ လှတာ ချမ်းသာတာကို ပြောတာ မဟူတ်ပါဘူး ။ အပျိုစင် ဘဝကိုပြောထားတာပါ ။
သေလောက်အောင်လှနေပါစေ လက်မထပ်သေးပဲ အအိုဖြစ်သွားရင် မိန်းမတန်ဖိုးက ကျသွားပြီဆိုတာ သတိရှိကြပါ ညီမငယ်တို့living together ( လက်မထပ်သေးပဲ အတူတူနေခြင်း) ဘဝမှာ ဆင်ချင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်း ခင်မင်လျက် …..
ညီမငယ်လေးများအတွက် ရှယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပေးကြပါနော……။အဏ္ဏာဝါ
အပြို စဈစဈ မြားသာ ဖတျရနျ
ခေါငျးစဉျကွညျ့ပွီး တမြိုး မထငျပါနဲ့နျောအအိုတှဖေတျမိရငျ စိတျဓါတျကမြှာစိုးလို့ပါ
အပြိုစဈစဈဆိုတာက ခုခတျေက ၁၆ နှဈ၁၇နှဈဆိုရငျကို ရညျးစားက ရှိနကွေတာ ။ ရညျးစားဖွဈတာ ၁ ရကျမကွားဘူး living together က နနေကွေပွီလေ…..တကယျတော့ လကျမထပျရသေးပဲနဲ့အတူတူနကွေတာ မိနျးခလေးတဈယောကျအတှကျ လုံးဝတနျဖိုးကသြှားပါပွီ….
အပြိုစငျ ဘဝဆိုတာ ယောင်ျကြားတိုငျးရဲ့ တနျဖိုးထားခွငျးကို ခံထားရသူလို့တောငျ တငျစားထားကွပါတယျအပြိုစငျကနေ အအို ဖွဈဖို့က ၅မိနဈမကွာပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ အအိုကနေ အပြို ပွနျဖွဈဖို့က ရှိသမြှ စညျးစိမျး ပုံပေးမယျဆိုရငျတော့ ဒီ ဘဝအတှကျပွနျမရနိုငျတော့ပါဘူး…..
ခဈြသူရှိခဲ့ရငျလညျး ဒီအပြိုစငျဘဝကို ထိနျးသိမျးပါ။ ခဈြသူကို နားလညျအောငျ သူသဘောပေါကျအောငျ ပွောပွထားပါ။ ဒါမှ သူဘကျက လကျမခံဘူး ။စိတျခုသှားတယျဆိုရငျတော့ ရဲရဲကွီးသာ လမျးခှဲလိုကျပါ။ သူ တကယျခဈြတာမဟုတျတာသခြောနပေါပွီ။
သလေောကျအောငျခဈြနပေါစေ အပြိုစငျ ဘဝကိုထိနျးသိမျးထားပါ။ဘဝမှာ ရညျးစားဦးနဲ့လှဲကတြာ ၁၀၀မှာ ၉၀ အထိ ရှိထားတာပါ။ ရညျးစားဦးကတညျးက အပြိုစငျဘဝကို ပေးထားခဲ့လို့။
အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ သူနဲ့မြား လှဲသှားခဲ့ရငျ နောငျတှငျ ကိုယျနဲ့တကယျလကျတှဲရမယျ့ ယောင်ျကြားနဲ့တှမှေ့ာ အကွီးကွီးနောငျတရပါလိမျ့မယျ ။အဲကမြှတော့ နောငျတရပါတယျလို့သိသှားလညျးနောကျကသြှားပါပွီ။အခနျ့မသငျ့ရငျ အိမျထောငျရပွေသာနာတှတေောသျဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ထိုငျဝမျမှာ အိမျထာငျကပြွီးလို့ကလေးတောငျ ၃ယောကျ ရပွီးမှ အပြိုဘဝတုနျးက ရညျးစားဟောငျးနဲ့အတူတူနခေဲ့တဲ့ video ဖိုငျတှေ laptopကနတေဆငျ့ပွနျ့ပွီး အိမျထောငျရေးကှဲသှားခဲ့တာ တကယျလကျတှပေ့ါ။
အတုမယူသငျ့တာတော့ အတုမယူပါနဲ့ညီမတို့။ (နောကျတဈတဈခု အှနျလိုငျးမှာ statusတငျရငျလညျး စောကျဘာဖွဈ စောကျညာဖွဈတယျ ။အဲလို စောကျတှထေညျ့ထညျ့ပွီး ရိုငျးတာတှေ မတငျကဖြို့လညျး တောငျးဆိုပါတယျ။
ကိုယျဟာကိုယျ ဘာထငျနလေဲတော့မသိပါ။ အမြားအမွငျမှာ အရမျးရိုငျးတဲ့မိနျးမဆိုတာတော့ လူတိုငျးအထငျသေးသှားတတျကွပါတယျ။ )မိနျးမတဈယောကျရဲ့တနျဖိုးဆိုတာ လှတာ ခမျြးသာတာကို ပွောတာ မဟူတျပါဘူး ။ အပြိုစငျ ဘဝကိုပွောထားတာပါ ။
သလေောကျအောငျလှနပေါစေ လကျမထပျသေးပဲ အအိုဖွဈသှားရငျ မိနျးမတနျဖိုးက ကသြှားပွီဆိုတာ သတိရှိကွပါ ညီမငယျတို့living together ( လကျမထပျသေးပဲ အတူတူနခွေငျး) ဘဝမှာ ဆငျခငျြနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးရငျး ခငျမငျလကျြ …..
ညီမငယျလေးမြားအတှကျ ရှယျပေးခွငျးဖွငျ့ ကူညီပေးကွပါနော……။အဏ်ဏာဝါ
မိုးအောငျရငျက လကျထပျမယျပွောပွီး ကာမလိမျလညျခဲ့လို့ဆိုကာ တရားစှဲဆိုလိုကျတဲ့ ရညျးစားဟောငျး
March 8, 2019 MM Live News
October 27, 2018 MM Live News
မြန်မာပြည်ကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ဒီစာကိုဖတ်ထားသင့်တယ်…